Khud-baddii Madaxweynaha Somaliland Muj.Muuse Biixi Cabdi Ee Xuska Sannad Guuradda 27-aad Ee 18-ka May 2018 [QORAAL]
Tuesday May 15, 2018 - 13:34:07 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Halkan ka akhriso khudbaddii saaka ee madaxweyne Muuse Biixi iyada oo qoraal ah.
"Cadowgayagana waxa aanu u sheegaynaa maanta gacanna waxa aanu ku haynaynaa difaaca dalka, gacanna waxa aanu ugu dabbaal degaynaa qaran-nimadayada Somaliland”
Bismillaahi Raxmaani Raxiim;
Ugu horayn, waxaan salaamayaa:
Dadweynaha iyo Ciidamada Qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland, meel kasta oo ay joogaan.Ø
Waxa kale oo aan salaamayaa marti sharafta iyo masuuliyiinta Qaranka ee madashan bilan fadhiya.
Madaxweyne Daahir Rayaale KaahinØ
Madaxweyne Ku-xigeennadii horeØ
Shir-guddoonka labada GoleØ
Guddoomiyaha Xisbiga UCIDØ
Masuuliyiinta Axsaabta QarankaØ
Wufuudda caalamiga ah ee ka kala yimid dalalka Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Canada, Norway, Britain, EU iyo USA.Ø
Waxaan si gaar ah u soo dhawaynayaa masuuliyiinta ka socota Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia oo wefti culus ku yimid.Ø
Safaaradda Dawladda Federalka EthiopiaØ
Safaaradda Dawladda DjiboutiØ
Safaaradda Dawladda TurkeyØ
iyo Hay'ddaha Qaramadda MidoobayØ
Waxaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaa dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee jooga dalka gudihiisa iyo dunida dacalladeeda, munaasibada maalinta qiimaha iyo qaayaha weyn leh ee 18-ka May awgeed, oo ku beegan 27 guuradii ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii xoriyadda Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa ma-seexdayaasha, lagu seexdo, halyeyada aan hadh-galin ee surin colaadeed iyo saymo dhaxameed u jooga difaaca Qarannimadda Somaliland. Waxaan leeyahay Ciidammada kala duwan ee Qarankeena, kaalinta aad ugu jirtaan jiritaanka dalkeenu waa kaalin muuqata oo u tirsan shacabkiina, taariikhdana idiinku jirta.
Dhammaanba shacabka reer Somaliland meel ay joogaanba waxa aan ku wargelinayaa in Soomaaliya ay weerar qaawan oo xooggan kusoo qaadday qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidamada qaranka ee jiidda hore, dagaalkiina uu ilaa hadda socdo, waxa kale oo aan u sheegayaa in ciidamada qaranku ay guul la taaban karo ka gaadheen, dhammaanba jiidihii laga soo weerarayna ay ka gaadheen guul la taaban karo oo ay weliba hub ka furteen.
Caalamka waxa aanu u sheegaynaa in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay 25-goor (shan iyo labaatan goor) ay nasoo weerareen ama ay rasaas kusoo rideen ciidamada Soomaaliya, kuwa Jamhuuriyadda Somaliland ee dalkooda deggen, iyaga oo nagu soo xad-gudbay oo gudaha Somaliland soo galay 60KM(Lixdan kiiloo miter) oo xadka kasoo gudbay, intaasna waxa aanu ku jirnay oo cid kasta oo ergo ahi nagu waaninayeen in dagaal laga feejignaado, intaabana nabad baanu u taagnayn iyo wada-hadal, wayse ka maari maayeen inay nasoo weeraraan.
Waxa aanu u sheegaynaa ragga nasoo weeraray inaanu u dhigi doono casharkii aanu u dhignay Af-weyne iyo kuwa ay wax moodayaan ee Moorgan Gaanni kuwii ay soo qaadeen, waxa aanu u sheegaynaa inay nasoo xasuusiyeen dagaalladii soddon sano ka hor dalka ka dhacayey iyo wixii lasoo maray.
Maanta oo kale 27-sanno ka hor shacabka Somaliland waxay ugu suntan tahay maalin milgo, miisaan iyo maamuus culus ku leh. Waa maalintii ay dib ula soo noqdeen, una xasladeen Qaranimadii dalluunta dheer kaga dhacday ee laab-xaadhnaanta, xog la’aanta iyo xiisuhu seejiyey. Waxa hubaal ah oo aan hadh saarnayn in Somaliland halgan iyo hayaan dheer kadib ay ka soo kabatay intii ay ka-deed mudatay, maantana aynu haysano dal iyo calan xor ah.
Somaliland waxay leedahay taariikh fac-weyn oo boqolaal sanno jirtay. Waxay ahayd Maxmiyad (British Protectorate) ay xukunto Boqortooyada Ingiriisku.
Halka ay Soomaaliya ahayd meel uu Talyaanigu gumaysto. 26 June 1960-kii ayay Jamhuuriyadda Somaliland ka qaadatay xorriyadeeda Boqortooyadda Ingiriiska, xilligaas oo ay aqoonsadeen 44 dal oo ay ku jireen Maraykanka iyo Boqortooyadda Ingiriisku.
Baadi-goobkii loogu jiray mideynta 5-tii Soomaaliyeed ee ay kala qoqobeen gumaystayaashii Reer Galbeedku aw-geed ayay Dawladdii iyo shacabkii Somaliland u sad-qeeyeen xornimadoodii 1 July 1960, si loo abuuro Jamhuuriyad Soomaaliyeed. Balse midnimadaas dal ahaan iyo dad ahaanba, ma aynu mahadin.
18-ka May, kumay iman hadiyad la inna siiyey, balse waxa loo qubay dhiig, waxaana loo huray naf iyo maalba wixii Shacabka reer Somaliland lahaayeen.
18 May waa midhihii Go’aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay Shir-weynihii Aayo Ka-tashiga Somaliland ee Magaalada Burco 1991. Waa go’aan ay saxeexeen Salaadiin, Garaado iyo Guurtidii ka kala yimid dhammaan gobollada dalka.
Wiilkii iyo gabadhii maalintaa dhashay, maanta waa gaashaan qaad, caruuro iyaguna sii dhalay. Waa jiil ku garaadsaday jiritaanka iyo calanka saddexda midab leh ee Jamhuuriyadda Somaliland. Haddii loo baahdana naftooda iyo ta caruurtoodaba u huraya difaaca dalkooda. Wax ay midnimo ka arkeenba ma jirto. Waa jiilka maanta ugu tiradda badan dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Sannadkan xuska munaasibadda 18 May waxa uu ku soo beegmay xilli aynu ka soo baxnay doorashooyin iyo tartan saaxiibtimo. Waxa hubaal ah in guushu marba qof raacdo. Sidaasina waa sunnaha nolosha iyo tartanka. Shacabka Somaliland waxaan leeyahay kursigu saddexda xisbi hal mar ma wada qaado, mana wada fadhiistaan. Balse waxa inna wada deeqaa waa dalkeena sharafta leh.
Waxaynu si siman ugu wada noolaan karnaa is-jacayl, ixtiraam, sinaan iyo caddaalad. Maanta waxa aan Madaxweyne u ahay kii idoortay iyo kii saaxiibadayda kale u codeeyey intaba. Dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, waxa aan leeyahay waxa inna dhiqi kara nabad, walaalnimo, waayeelnimo, wax-wada-lahaasho iyo Qarankeena oo aan wada ilaashano.
Maxaa u qabsoomay Jamhuuriyadda Somaliland muddadii ay Jirtay:
Hiil Alle, hayaan dheer, himilo qeexan iyo halyeeyo aan habeen ka ladin ayaa soo hooyey guusha aynu maanta dhammaanteen ku naaloonayno, hadh-sanayno, kuna haysano dal xor ah.
Waxaan u mahadnaqayaa odayaashii, siyaasiyiintii iyo wax-garadkii dhidibbada u taagay jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland, oo aan ka xusi karo:
1. Madaxweyne Abdiraxmaan Axmed Cali Tuur
2. Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
3. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin
4. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo
5. Iyo Odayaashii Golayaasha Guurtida iyo Wakiillada JSL.
Dhammaantood waxa ay soo qaateen door iyo kaalin shariif ah. Alla ha u naxariisto inta dhimatay, inta noolna sharaf iyo cisi ha ku nooleeyo.
Muddadii uu jiray qarankani, wuxuu ku tallaabsaday guulo aad u waaweyn, oo aan qoraal lagu soo koobi karin, iyada oo waliba Horumarkaa iyo Guulahaa bulshada caalamku wax la sheego ku lahayn, balse shacabka Jamhuuriyadda Somaliland oo isku-tashaday ayaa dhaliyey.
• Waxa aynu ka heshiinay dhammaan colaadihii iyo dhibaatooyinkii Dawladdii Somalia kala dhex-dhigtay Shacabka Gobta ah ee Somaliland.
• Waxa aynu hub ka dhigis u samaynay dhammaan ciidammaddii kala duwanaa ee dalkeena, si ay u noqdaan Ciidan Qaran oo tababaran oo dalkooda difaaca.
• Waxa aynu dib u dhisnay dhammaan haykalkii maamul iyo dawladnimo ee dawlad looga baahnaa. Maantana Somaliland waa Qaran 27 jir-saday oo leh ciid, calan, ciidan, cumlad, cuud iyo cuddud aan la soo hawaysan karin.
• Waxa aynu dib u dhisnay, una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaale ee dalka.
• Waxa aynu yeelanay Dastuur Qaran oo in ka badan 97% Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ku ansixiyeen sannadkii 2001.
• Waxa aynu dib u hirgalinay dhammaan adeegyaddii bulshada, sida waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha. Waxa ammaan iyo bogaadin u dirayaa dhammaan masuuliyiintii kala duwanaa ee soo gaadhsiiyey adeegyadan heerka maanta ay joogaan.
• Waxa aynu dalkeena ka dhignay dal Dimuqraadi ah, leh Axsaab badan, isla markaan qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah. Kuwaas oo mararka qaarkood aynu dal ahaan horseed ugu nahay Afrika.
• Waxa aynu soo jiidanay maal-gashi shisheeye iyo saaxiibo dhaqaale xoog-leh ku balaadhinaya, kuna casriyeynaya Dekeddeena Magaalada Berbera.
Himillada iyo Higsiga Qarankeena
Somaliland waxay maanta maraysaa marxalad aad u wanaagsan, oo haysata fursado wacan, saaxiibo badanna yeelatay. Hase yeeshee, Cadawgeenu ma quusan, waxaanu wali ku hawlan yahay hagar-daamada iyo xagal-daacinta Qarankeena. Quluub wada jira iyo isku-duubni baynu kaga guulaysan karnaa. Cadowgayagana waxa aanu u sheegaynaa maanta gacanna waxa aanu ku haynaynaa difaaca dalka, gacanna waxa aanu ugu dabbaal degaynaa qaran-nimadayada Somaliland.
Somaliland tuugsan mayso, ee waa ay tartamaysaa. Caalamka ictiraaf kaliya waydiisan mayno, ee waxaynu tusaynaa in aynu isku baahanahay. Waxa aynu hiigsanaynaa in aynu adkayno nabad-gelyada, kobcino dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka. Shicib iyo Dawladba waa in loo dhaqaaqaa Beer-qodaal iyo tacab. Dawlad ahaana Wasaaradda Horumarinta Beeruhu horseed bay ka noqonaysaa arrintaa. 1,500 hector oo beer qoraal ah bay hadda gacanta ku haysaa.
Waxa dareen xanuun badan nagu haya xukuumad ahaan dhibaatada uu u gaysan karo qiima dhaca shillinka Somaliland dadweynaha dan-yarta ah. Annagoo arrintaa ka dam-qanayna, waxa aannu qaadnay talaabooyin wax-ku-ool ah oo ku keenay maanta isbedel la dareemi karo suuqyada Sarifka dalka, Ilaa sicir bararku meesha kabaxana, hayaanka iyo halganka waynu wadaynaa.
Ka midho-dhallinta hammiga iyo hiigsiga Qarankeenu waa mudnaanta koowaad ee Siyaasadda Arrimaha Dibedda ee Xukuumadan.
• Tiirka koowaad ee Siyaasadda Arrimaha Dibeddu waa nabad-ku-wada noolaanshaha iyo daris-wanaaga dalalka Geeska Africa iyo guud ahaan adduunkaba.
• Tiirka labaad, waa in is-kaashi dhaw dalalka darisku ka yeeshaan dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, horumarka iyo is-dhex-galka.
• Tiirka saddexaad, waa ixtiraamka iyo xaq-dhawrka xuquuqda Qaranimo ee dalalka dariska ah iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Somalia oo dhibaato badani inna soo dhex-martay 30-kii sanno ee aynu wax wada la-hayn, waxa waajib ku ah in ay xaqiiqda waajahaan. Xaqiiqdu waxa weeyi, 27 sanno ka hor ayaynu kala baxnay, oo noqonay laba dal oo ku dhisan xuduudihii Isticmaarka, sida ay dhigayaan shuruucda iyo Axdi Qarameedka Midowga Afrika.
Waxaan leeyahay waynu kala guurnay, ee aynu si gobonimo iyo daris-wanaag leh u kala gurano. U tashada dalkiina dhibaataysan, kana waantooba arrimaha labada dal ku keeni kara cunfi, cuqdad iyo dib u soo noolaynta arami raagtay iyo utun aannaan wali cafin, laakiin hadhka iyo naacawda udgoon ee calankayagu na ilowsiiyey.
Waxaan ku talinayaa in aynu bilowno wada-noolaanshihii iyo is-xaq-dhawrkii ay lahaan jireen laba Qaran oo daris ah, wax-badana wadaaga. Taas baynu ku gaadhi karnaa labadeenuba mustaqbal wanaagsan iyo degenaansho Gobol.
Waxa aan u caddaynayaa Bulshada Caalamka in Somalia iyo Somaliland wixii ka dhaxayn jiray aannu diyaar u nahay Qaran ahaan in lagu fur-daamiyo wada-hadal iyo nabad. Haddiise la nala garan waayo, oo la iska dhaga-mariyo nabadda iyo walaalnimada, waxaan u sheegayaa Somalia iyo Bulshada Caalamkaba in aannu cudud iyo awood buuxda u leenahay in aannu difaacno Qarankayaga, isla markaana aannu cadawga u gaysano dhirbaaxooyin aannu ka soo waaqsan karin abid.
Dawladda Somalia iyo Maamullada yar-yar ee hoostaga waxa aan ugu digayaa colaada iyo dabka ay ka hurinayaan Tuka-rag iyo guud ahaan Xuduudka bari ee Somaliland. Somalia ka aqbali maayo in ay taako xuduudka Somaliland dhexdiisa ka sameeyaan daan-daansi dagaal. Haddii waanadaa iyo digniintaa dhago loo yeelan waayo, waxa aannu qaadi doonaa talaabo culays ku keenta guud ahaan nabad-gelyadda gobolka.
Dhibaatooyinka Qarankeena horyaala:
Waxa aad dhammaantiin ila dareensan tihiin in Qabyaaladda, Qaadka, Colaadaha beelaysan ee soo noq-noqday iyo is-aaminaad la’aanta shacabka ee meelaha qaarkood ka jirtaa ay tahay dhibaato xoog badan oo dalkeena hortaala, mustaqbalkiisana culays ku haysa.
Colaadsa ka aloosan Gobolka Sanaag, waxa aan u arkaa nasiib daro. Waa dhiig ku daadanaya xaq daro, Dawladda waxa ka go’an inay ka qaaddo tallaabo dawladnimo oo ay soo xidh-xidho oo gacnata kusoo dhigto qof kasta oo nabad-diid ah. Waxaad og tihiin in Wasiirkii Arrimaha Gudaha iyo odayaashii Guurtidu ay bil fadhiyeen deegaankaas, waxana Ilaahay mahaddii ah in dhawaad konton qof oo hubaysan inay ciidanku hubkii ka dhigeen, una gudbiyeen Boorama, kuwa lasoo wadona waxa aanu u gudbin doonnaa Saylac, Inanta, inanka, taajirka iyo ku kasta oo dagaalkaas ka qayb qaata oo fidno-wade ah, gacan dawladeed baanu ku qabanaynaa, waana naga go’aan oo waanu isku raacsannahay. Dhammaanba waxgaradka Sanaag waxa aan ugu baaqayaa inay ka hawlgalaan daminta colaadda ay wax ma-garatada iyo dadka fidno-wadeyaasha ahi abuurayaan, waxa aan si gaar ahaan waxa aan si gaar ah baaq ugu jeedinayaa maayarka Ceerigaabo iyo odayaasheedu inay ka hawlgalaan waxyaabaha ilaa shalay ka dhacaya, waana arrin naxdin leh in magaalo weyn oo Ceerigaabo oo kale ah in wiilal yaryari qoryo lasoo galaan oo dad xabbado ku dhuftaan.
Walaalayaal, waxa aan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Somaliland in ay midoobaan, in ay is-aaminaan, in ay iskaashadaan. Waxa aynu ku weyno iskaashi iyo walaalnimo, lagu heli maayo kalifaad iyo jujuub.
Waxa innoo ballan ah Qaran mid ah. Waxa innoo ballan ah Quluub wada jirta. Waxa innoo ballan ah himmilo saraysa.
Somaliland Guul - Somaliland Guul